IHE ND P ỌR Archi Ise Archives - The Now Word
Ihe na June 20, 2006 April 17, 2017 by Mark
Mgbe na-atụgharị uche na "ụlọ akwụkwọ Meri", okwu ahụ bụ "ịda ogbenye" ​​abanyeghachi n'ime ụzarị ise. Nke mbụ…
Ogbenye nke steeti "Nkwupụta okwu" (Unkown)
IN mbụ Joyful Mystery, ụwa Meri, nrọ ya na atụmatụ ya na Josef, gbanwere na mberede. Chineke nwere atụmatụ dị iche. Akpata oyi wụrụ ya ma tụọ egwu, na-eche na o nweghị ọrụ dị ukwuu. Mana nzaghachi ya ekwuputala maka afọ 2000:
Ka eme ya dị ka okwu gị si dị.
Onye obula n’ime anyi amutala atumatu puru iche maka ndu ya, ma nye ya onyinye puru iche ime ya. Ma agbanyeghị oge ole ka anyị na-enwere ndị agbata obi anyị anyaụfụ? "Ọ na-abụ abụ karịa m; ọ mara ihe karịa; ọ ka mma ile anya; ọ bụ ọkà okwu karịa" na na.
Oke ogbenye nke mbu anyi kwesiri inabata na i inomi ogbenye nke Kraist bu nabata onwe anyị na atụmatụ Chineke. Ndabere nke nnabata a bụ ntụkwasị obi — ntụkwasị obi na Chukwu mere m maka ebumnuche, nke izizi bụ na Ọ ga-ahụ m n'anya.
Ọ na-anakwere na abụ m ogbenye na omume ọma na ịdị nsọ, onye mmehie n'eziokwu, dabere kpamkpam n'ụba nke ebere Chineke. N'ime onwe m, enweghị m ike, ya mere kpee ekpere, "Onyenwe m, meere m ebere ka m bụ onye mmehie."
Ogbenye a nwere ihu: a na-akpọ ya ịdị umeala n'obi.
Ihe na June 21, 2006 April 17, 2017 by Mark
ỌDOVANYA IJU Onwe Onye Mural na Echiche Abbey, Missouri
IN nke abụọ Joyful Mystery, Meri gawara inyere nwa nwanne nne ya Elizabet bụ onye dịkwa ime. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Mary nọrọ n'ebe ahụ "ọnwa atọ."
Oge izizi nke mbụ na-abụkarị ihe na-agwụ ike maka ụmụ nwanyị. Ọganihu ngwa ngwa nke nwa ahụ, mgbanwe homonụ, mmetụta niile… mana, ọ bụ n'oge a ka Mary dara ogbenye mkpa ya iji nyere nwanne nwanne ya aka.
Ezigbo Onye Kraịst bụ onye nyere onwe ya ọrụ maka onye nke ọzọ.
Chukwu bu onye mbu.
Onye agbata obi m bu nke abuo.
Abụ m nke atọ.
Nke a bụ ụdị ike kacha ike. Ọ bụ ihu bụ nke n'anya.
Ihe na June 22, 2006 April 17, 2017 by Mark
GEERTGEN na Sint Jans, 1490
WE chee echiche nke oma n’ime akwukwo nke ato n’azo na amughi Jisos n’azu ogwu ma obu ulo obula. Eze anyị tọgbọrọ n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nrin'ihi na ọ dighi oghere diri ha n'ulo ndi-ije."
Ma Josef na Meri ekwesighi ka a kasie ha obi. Ha achọpụtaghị ihe kacha mma, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịchọ. Ejiri afọ ojuju ju ha afọ.
Ezi Christian kwesiri ịbụ nke dị mfe. Mmadu nwere ike baa ọgaranya, ma bie ndụ dị mfe. Ọ pụtara ibi na ihe mmadụ chọrọ, kama ịchọrọ (n'ime ihe kpatara ya). Ime ụlọ anyị na-abụkarị temometa mbụ nke dị mfe.
Ihe dị mfe ọ pụtara apụtaghị na anyị ga-ebi n'udo. Ekwenyesiri m ike na Josef sachara ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri, na Meri ji ákwà dị ọcha kpuchie ya, nakwa na a na-edozi obere ụlọ ha dị ka o kwere mee maka ọbịbịa Kraịst. Otu a kwa ka obi anyị gụgharịrị maka ọbịbịa nke Onye-nzọpụta. Ogbenye nke idi mfe na-eme ohere.
O nwekwara ihu: afọ ojuju.
Ihe na June 23, 2006 April 17, 2017 by Mark
UBUA nke ịchụ àjà
"The Fourth Joyful Mystery" nke Michael D. O'Brien dere
D AC KA nye iwu Livai, nwayi nke amuworo nwa g mustbubata ulo nsọ:
nwa-aturu, nke b yearara otù arọ, iji chu àjà-nsure-ọku, na nduru, ma-ọbu nduru, maka àjà-nmehie… (Lev. 12: 6, 8)
N'ime Anọ nke Ọyụ Mystery, Meri na Josef nyere otu nnụnụ abụọ. Ha dara ogbenye, ọ bụ naanị ihe ha nwere ike imeli.
A na-akpọkwa ezigbo Onye Kraịst ka ọ nye, ọ bụghị naanị oge, kamakwa akụnụba — ego, nri, ihe onwunwe— "ruo mgbe ọ ga-ewute ya", Ezigbo Nne Teresa ga-ekwu.
Dika ntuziaka, ndi Israel genye ndi otu ụzọ n'ụzọ iri ma ọ bụ pasent iri nke "mkpụrụ mbụ" nke ego ha nwetara na "ụlọ nke Onyenwe anyị." N’ime Agba Ọhụrụ, Pọl ekwughị okwu banyere ịkwado Chọọchị na ndị na-ekwusara Oziọma ahụ. Kraist na-ebukwa ndị ogbenye mkpa.
Ahụtụbeghị m onye ọ bụla nke na-eme otu ụzọ n'ụzọ iri nke ego ha na-enweta nke na-enweghị ihe ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, "granaries" ha na-asọba n'ihe ha na-enye.
Nye onyinye, a ga-enye gị onyinye dị mma, atụkọtara ọnụ, maa jijiji, nke ga na-erubiga ókè, ka a ga-awụkwasị gị n'apata ụkwụ gị. (Luk 6:38)
Ogbenye nke ịchụ aja bụ nke anyị ji ele ngafe anyị anya, obere ka igwu egwu, ma nwekwaa “nri nwanne m nwoke”. A na-akpọ ụfọdụ ka ha ree ihe niile were nye ya ndị ogbenye (Matiu 19:21). Ma anyị niile akpọrọ “ịjụ ihe nile anyị nwere” —ịhụnanya anyị maka ego na ịhụnanya maka ihe ndị ọ pụrụ ịzụta - na inye, ọbụlagodi, site n’ihe anyị enweghị.
Ugbua, anyi g’enwe ike na enweghi okwukwe n’okpuru nduzi nke Chineke.
N'ikpeazụ, ịda ogbenye nke àjà bụ ọnọdụ nke mmụọ nke m dị njikere mgbe niile inye onwe m. Ana m agwa ụmụ m, "Were ego na obere akpa gị, ọ bụrụ na ị hụ Jizọs, nwoghara na ndị ogbenye. Nwee ego, ọ bụghị nke ukwuu imefu, inye."
Kinddị ịda ogbenye a nwere ihu: ọ bụ mmesapụ aka.
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord: Shall I not open for you the floodgates of heaven, to pour down blessing upon you without measure? (Ml 3:10)
Ihe na June 24, 2006 April 17, 2017 by Mark
UBUA nke ịkọ
Mystery Joyful nke ise (Amaghi)
MGBE inwe Ọkpara Chineke dị ka nwa gị abụghị ihe mmesi obi ike na ihe ga-adị mma. Na Ise Ise Joyful Mystery, Meri na Josef chọpụtara na Jizọs na-efu n'ime ha convoy. Mgbe ha chọchara ya, ha chọtara ya n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na ha "ibobo" na na "ha aghọtaghị ihe ọ gwara ha."
Isi nke ise, nke nwere ike bụrụ nke kacha sie ike, bụ nke ikwenye: ịnakwere na anyị enweghị ike izere ọtụtụ nsogbu, nsogbu, na ntụgharị nke ụbọchị ọ bụla na-eweta. Ha na-abịa — ma o juru anyị anya — karịsịa mgbe ha na-atụghị anya ha ma yie ndị na-erughị eru. Nke a bụ kpọmkwem ebe anyị na-enweta ịda ogbenye anyị… enweghị ike ịghọta uche dị omimi nke Chukwu.
Mana ịnabata uche nke Chineke site na iji obi nke obi, na-enye dị ka ndị otu nke òtù ndị nchụàjà bụ ndị nhụjuanya anyị na-ata ahụhụ nye Chineke ka ọ gbanwee ghọọ amara, bụ otu ịdị adị ahụ nke Jizọs ji nabata Obe ahụ, na-asị, "Ọ bụghị uche m kama eme gị." Lee ka Kraịst si daa ogbenye! Lee ka anyị si baa ọgaranya n’ihi ya! Na ole mkpụrụ obi onye ọzọ ga-aba ọgaranya mgbe ọla edo nke nhụjuanya anyị a na-enye ha site na ịda ogbenye nke nnyefe.
Uche Chineke bụ nri anyị, ọ bụrụgodị na ọ na-atọ ya ụtọ mgbe ụfọdụ. Obe ahu di ilu n’ezie, ma onwegh mbilite n’onwu ma ewezuga ya.
Ogbenye nke ịtọgbọ nwere ihu: ndidi.
I know your tribulation and poverty, but you are rich... Do not be afraid of anything you are going to suffer... remain faithful until death, I will give you the crown of life. (Mkpu. 2: 9-10)
Ihe na June 25, 2006 April 17, 2017 by Mark
IHE ND. A ụzarị ọkụ ise, nke si n’obi Onye Kraịst,
nwere ike ikwuputa ọchịchịrị nke ekweghị ekwe n'ime ụwa nke akpịrị ịkpọ nkụ kwere:
St. Francis nke Assisi, nke Michael D. O'Brien dere
Ogbenye nke steeti
ỌDOVANYA IJU Onwe Onye
Inessdị nsọ, ozi nke na-eme ka mmadụ kwenye na-enweghị mkpa okwu, bụ ngosipụta dị ndụ nke ihu Kraịst. —JỌN PAUL II, Novo Millennio Ineunte
Ọụ n'Iwu Chineke
Ihe na July 1, 2016 April 17, 2017 by Mark
maka Fraịdee, Julaị 1, 2016
Tinye Ememe ncheta St. Junípero Serra
ỌT .T. ekwuru na jubili nke afọ nke ebere nke a banyere ihunanya na ebere nke Chineke n’ebe ndi nmehie nile nọ. Mmadu nwere ike ikwu na Pope Francis agbanyela oke na "nabata" ndi nmehie n'obi nke Nzuko. Olu Thindị dị n'etiti Ebere na Merjụ okwukwe-Nkebi nke I-III Dị ka Jizọs kwuru n'Oziọma nke taa:
Ndị ahụ́ gbasiri ike adịghị mkpa dibịa, ma ndị ọrịa na-achọ ya. Gaa mụta ihe okwu a pụtara, Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume kama ọ bụ ndị mmehie.
Olu Thindị dị n'etiti Ebere na Merjụ okwukwe-Nkebi nke I-III